ကြာရှည်မခံသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လူတစ် ဦး ၏အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းအားကတိကဝတ်ပြုမှုအားနည်းခြင်း (၂၀၁၂) - ၃ ပတ်ကြာညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ခြင်း - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
comments: ဘာသာရပ်များ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သာ3ရက်သတ္တပတ်) မှရှောင်ကြဉ်ရှိသည်ဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု။ ယင်းအုပ်စုနှစ်စုနှိုငျးယှဉျညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆက်လက်တဲ့သူတွေကိုထိန်းချုပ်သင်တန်းသားများကိုထက်ကတိကဝတ်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့အစား3ရက်သတ္တပတ်၏3လကြာကြားနေလျှင်အဘယ်အရာဖြစ်ပွားခဲ့သည်နိုငျသလဲ
လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: Vol ။ 31, အမှတ် 4, စစ။ 410-438 ။
က Nathaniel အမ်လမ်းဘတ်, Sesen Negash, Tyler အက်ဖ် Stillman, Spencer ခ Olmstead နှင့်ဖရန့်ဃ Fincham (2012) ။
လေ့လာမှု 1 (n = 367) fပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအောက်ပိုင်းကတိကဝတ်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ ound နှင့်
လေ့လာမှု2(n = 34) စူးစမ်း data တွေကိုသုံးပြီးဒီတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူ။
လေ့လာမှု3(n = 20) သင်တန်းသားများကိုကျပန်းဖို့တာဝန်တစ်ခုခုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရာမှတစ်ခုသို့မဟုတ် Self-ထိန်းချုပ်မှုအလုပ်တခုကိုမှရှောင်ကြဉ်ခံခဲ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆက်လက်သူများသည်ထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများကိုထက်ကတိကဝတ်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသုံးတပတ်လေ့လာမှုများ၏ကြာချိန်အဘို့အညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရေးမှာထိရောက်သောသက်သေပြသော်လည်း, သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုဆက်လက်ထံမှထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများကိုဟန့်တားခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုခွအေနအေညစ်ညမ်းအခွအေနေကနေရှောင်အတွက်သင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ကတိကဝတ်အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးအစီရင်ခံအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ထောက်ခံခဲ့သည်။
နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအတွက်သင်တန်းသားများကိုပျြောမှေ့စတစ်ခုခု (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ) မှကြားနေအဖြစ်ဒါ့အပြင်ကတိကဝတ်အပေါ်ဆက်လက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, သာ. ကြီးမြတ် Self-ထိန်းချုပ်မှုကိုကျင့်သုံးရာမှ Self-စည်းမျဉ်းအရင်းအမြစ်များကွယ်ပျောက်သွားတစ်ဦးခြားနားချက်အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့မရနိုင်ပါ။
လေ့လာမှု4(ခုနှစ်တွင်n = 67), ညစ်ညမ်း၏အဆင့်မြင့်စားသုံးသင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းမှချက်တင်စဉ်အတွင်းတစ် extradyadic မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပိုပြီးပါသေးတယ်.
လေ့လာမှု5(n = 240) ထိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဖောက်ပြန်ဖို့အပြုသဘောဆက်စပ်ခဲ့တာနဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့ကတိကဝတ်ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားရလဒ်များကိုတစ်တသမတ်တည်းပုံစံ (လေ့လာမှု 1) Cross-Section (လေ့လာမှု 2) အပါအဝင်ချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးသုံးပြီး, (လေ့လာမှု 3) စူးစမ်း, စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်အမူအကျင့် (လေ့လာရေး4နှင့် 5) ဒေတာ။